“Maxjarka Berbera Shirkadihii maal-geliyay mooyaane cid kale inay Lacag qabato lama ogola” | Somaliland.Org
“Maxjarka Berbera Shirkadihii maal-geliyay mooyaane cid kale inay Lacag qabato lama ogola”
November 26, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- “Markabkii u dambeeyay ee Xoolaha u qaadayay Xajku maanta (shalay) ayuu ka baxay Dekedda Berbera. Sababtoo ah, wixii hadda ka dambeeya Xoolaha ka baxaa kama gaadhayaan Xajka..Waxa isu-geyn qiyaastii Dekedda Berbera ka dhoofay in ka badan 600,000 oo Neef. Xoolo ilaa 500,000 waxa qaatay Shirkadda Al-Jaabiri, 100,000 ee kalena waxa qaatay Ganacsato Carbeed oo kale.” sidaa waxa yidhi Wasiirka Xannaanada Xoolaha Somaliland Dr. Idiris Ibraahim Cabdi oo ka warbixiyay dhoofka Xoolaha ee xilligan Xajka.
Wasiirka oo shalay Waraysi gaar ah uu la yeeshay Weriye Cabdiraxmaan Muuse Cumar oo ka tirsan Telefishanka SLSC, ayaa sheegay in Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya uu is-hortaagay Xoolo u soo socday Somaliland oo la doonayay in laga dhoofiyo Dekedda Berbera. Isla markaana wuxuu Wasiirku baaq u diray Maamulkaas. Waxaanu sheegay in Xukuumad ahaan ay ballan-qaadayaan in aanay is-hortaagin Xoolo ganacsi oo dhoofaya meel kastaba ha laga dhoofiyee, balse Cashuurta dawladda laga qaadayo.
Waraysigaas iyo jawaabihii uu bixiyay Wasiirku ayaa wuxuu u dhacay sidan;
S: Maxjar laga hawl-geliyay Berbera, faahfaahin naga sii shuruudihii Maxjarkaa iyo siyaasadda uu ku shaqaynayo?
J: Maxjarkan waxa maalgeliyay Dawladda Raysal-Khaa’imah iyo Shirkadda Al-Jaabiri..Maxjarka isticmaalkiisa wax Siyaasad ahi kuma jiraan oo waa Maxjar Caafimaad, waxaana lagu baadhayaa waa Caafimaad. Wararkii la lahaa haddii la furo Xoolaha Somaliland baa la aqoonsanaa iyo caynkan, waxba kama jiraan. Haddii ay Siyaasad u xidhnaayeen, waxay u furmi lahaayeen Siyaasad..wuxuu u xidhnaa Mushkilad Caafimaad. Shardiga ugu way nee ugu inagu xidhnaana wuxuu ahaa in Maxjar laga hirgeliyo dalka, waxaynu maal-gelin u helnay Maxjarkii. Waxaanu ku furmay markii ay Waddamadaasi arkeen in Maxjarkaasi shaqaynayo. Waxaana Maxjarka jooga Dhakhaatiir khuburo ah oo waligood ku soo jiray Barnaamijka Xoolaha. Waxaanay aad iyo aad u sugeen Caafimaadkii Xoolihii dhoofayay. Markabkii kan ka horreeyay ee Jidda tegay markii la baadhay Xoolaheenii waxay noqdeen 100% kuwo Caafimaad qaba. In aanu Maxjarku inaga xidhmin ayaananu isku dayaynaa oo waa ballan, haddaynu inagu sugno in uu Caafimaad-xumo aanu u xidhmin.
S: Intii Sucuudigu Xoolihii Somaliland Xayiraadda ka qaaday, maxaad isleedahay dalka way u qabsoomeen?
J:..Xajkan inoo furmay wuxuu furay Shaqadii oo shaqaale badan ayaa shaqaynayay oo xitaa waxaan ogahay in ay Ciyaal-Iskuulkii shaqaynayeen oo aanay Waalidkood xaqal-Ciidkii waydiinayn..Markaa wax badan buu soo kordhiyay, waxa kaliya oo aan doonayay in aan gobollada iyo degmooyinka dalka aad iyo aad ugu ammaano in ay ajiibeen codsigayagii ahaa in laga qayb qaato Dhoofka Xoolaha oo la kobciyo. Sidoo kale, baraha kaantarroolada Magaalooyinka oo iyana ka hawl-galay in aanay Xooluhu halkaa ku xannibmin…halka Neefka laga soo qaado, ilaa halka uu ka dhoofayo ma jirto wax Cashuur ah oo laga qaado oo Cashuurta Dawladda waxa laga qaadaa waa Berbera, balse haddii laga tegi waayo waxa laga qaadaa waa adeeg ay daabaqaadda iyo waxaasi ka mid yihiin. Taasina waa degmada uu ka soo baxay ama Miyigii uu ka yimi.
S: Intii ay Xoolaha Somaliland dhoofayeen, ma jiraan dariiq aan Dekedda Berbera ahayn oo ay Xooluhu ka dhoofaan oo aad ka war qabtaan?
J: Waxa weeye,…Ninka dan u arka in aanu ka dhoofin Dekedda Berbera ee meel kale mariya ama Jabuuti ha ahaato ama meel kale, isagay jirtaa. Laakiin, dawladdu meel kasta Cashuurta way qaadaysaa ama Berbera ha ahaato ama Lawya-caddo ha ahaato’e. haddii uu Kootarabaan yahayna waa la qabanayaa. Waxase aan ku rejo waynahay oo aan ku kalsoonahay in aan laga weecan karin Maxjarka Berbera. Ninka iyada oo Maxjarka Berbera oo jira ka dhoofinaya Xoolihiisa meel kale, waxaan qabaa in aanu ahayn Nin ganacsi doonaya.
S: Waxa jira Dareeno ka soo baxayay is-maan-dhaaf la sheegay in uu idin dhex maray idinka iyo Dakhaatiirta Xannaanada Xoolaha oo ka dhashay Mushaharka oo ay dalbadeen in boqolkiiba wax la siiyo, idinkuna in Mushahar loo siiyo. Halkay ku dambaysay?
J: Horta, arrintaasi bilowgii ayay ahaydoo waxay wax ka soo dhex baxeen Nidaamkii oo qoladan maalgelisay Maxjarka ee Lacagta Maxjarka qaadanaysay ayaa fikir keentay oo ay leeyihiin sidaa wax hanalagu siiyo, anaguna aragti kale ayaanu keenay..Imikana waxa la wareegay Shirkadihii maalgeliyay, iyaga mooyaane cid kalena Lacag ma qaban karto oo waa la joojiyay. Markaa waxa weeye, wuxuun bay ahayd dhakhaatiir leh sidii hore hanalagu siiyo iyo Maxjar leh Mushahar qaata. Waanu dhex galnay oo waa laga heshiiyay.
S: Wasiir, maxaad u soo jeedin lahayd guud ahaan Shacabka Somaliland?
J: Waa su’aal fiican, …waxaan Shacabka Somalilland u soo jeedinayaa in dawlad, dadweyne iyo shicib-ba la qaado olole lagu bannaynayo oo Xoolihii loogu soo celinayo Deegaankii ay ku noolaan karayeen. Sababtoo ah, meel kasta waa layska ootay…waxa kale oo aan soo jeedinayaa in maadaama Maxjarkeenii Berbera la furay oo Xoolihii laga dhoofinayo gacan la siiyo dadka Xoolaha ka keena Dalalka kale, sida Soomaaliya iyo Kililka shanaad ee Itoobiya oo gacan furan lagu soo dhaweeyo, una arkaan inay dad wanaagsan yihiin Somalialnd…Midda kale, waxaan Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya halkan u marinayaa, waxa jiray Xoolo u soo socday Dekedda Berbera oo Maamulkaasi ku joojiyay Gaalkacayo oo muddo lagu hayay oo lagu caddilay. Markaa waxaanu u sheegaynaa Maamul-gobolleedkaas in Xoolo badani ka dhoofaan Berbera, Ganacsato reer Somaliland ahina ay hore uga dhoofsan jireen Xoolaha Dekedda Boosaaso, iyaga oo Ciidankayagiina ay Xadka joogaan, ayaananu haddana joojinin mar qudha. Sababtoo ah, Somaliland ahaan waxaanu u aragnaa Ganacsiga Xoolaha in uu noqdo mid xor ah. markaa in Xoolo Somaliland u soo socda lagu joojiyo Puntland, waxaanu u aragnaa arrin aad iyo aad u xun. Waxaananu leenahay..in aan Xoolaha Somaliland u soo socda wax dhibaato ah loo geysan oo uu qabsado ganacsigiisa oo madax bannaan. Anaguna waxaanu ballan-qaadaynaa in dhinacay doonaan ha u socdaane Xoolo ganacsi u socda aananu is-hortaagin.